AwdalOnline - Gadabuursow ma waxa la gartey iney Zamzam, Duur, Ina Biixi iyo Timocad ka taliyaan arinta Saylac oo looga aamuso?
You are here : Home » Saylac-Gobolka SALAL-Sacadiin » Gadabuursow ma waxa la gartey iney Zamzam, Duur, Ina Biixi iyo Timocad ka taliyaan arinta Saylac oo looga aamuso?
Gadabuursow ma waxa la gartey iney Zamzam, Duur, Ina Biixi iyo Timocad ka taliyaan arinta Saylac oo looga aamuso?
For AwdalOnline Updates admin On Monday, January 21st 2013. Qeybta Wararka Saylac-Gobolka SALAL-Sacadiin Gadabuursi guul bay tirsadeen maalintii la dhaariyay maayarka iyo ku xigeenka Saylac iyo xildhibaanadii sida xaqa ah ee dimuqraadiyadu ku jirtey loo doortey. Guul bey tirsadeen Gadabuursi maalintii ay gaashaanka u daruureen hadyadii SNM dhulkooga u bixineysey. Guul bey tirsadeen markii hadalkii qudhmuunaa ee kasoo baxay ina Biixi dib ugu noqdey afkiisa ee la gartey sirta qalbigiisa ku jirta isagoo ka wakiil ah kuwii Gadabuursi xasuuqey ee SNM.
Guushu maaha ta maalin aad hesheed u dabaaldagto dabadeedna aad ilowdo. Guushu maaha ta aad u dabaaldagto eed hadana ka seexato. Guushu waata kow kuu bilowda eed ku dadaashid guusha kalee tan ka dambeysa. Guusho waa ta ku garansiisa sida aad u hentiyeyso guusha kaleed gaadhi doonto. Sida muuqata Gadabuursi odoroskii buu ku ilaaway qadiyadii Saylac bixinteeda. Gadabuursi wuxuu ilaawey ineyna arintaasi SNM ka dhamaanin oo lagusoo maqanyahay loona khidadeyn doono. Maxaa tolow keeney in laga seexdo arintii dhulbalaadhsiga ee Saylac ee caruurteenu u dhinteen?
Mar aan shaley qooraansiyay shabakadaha ayaa waxaan ogaadey iney SNM soo rogaal celisey oo Duurna faro fiiqii lasoo noqdey. Markii hore ee SNM Borama kusoo duushey yagoo dhigahoogiina wata, ka ugu weyn reerka iyo miisaano culus oo ah kuwa ay ku tilmaamaan wasiiro bay ahaayeene maxaa maanta keenay inan yar iyo gabadh iney arinta Saylac ka taliyaan ( Duur iyo ZAMZAM). Waar bal ceebtan kaalaya!!! Gadabuursi maxaa dareenkii ka qaadey? Hadii wasiiro lasoo dirayo maxaa qariyay kuwii Gadabuursi? Saylicigii geesi baad tahay loogu sacaba tumey halkuu ku dambeeyay?
Aniga oo arimahaa la yaaban ayaan hadana waa amuuro wareeree aan ogaadey in laga tanaasuley maayar ku xigeenkii. Hadana ceebaa ka dambeysey oo waa la diidey in la aqbalo oo la qaato ku xigeenka ayay wararku sheegeen. Cajiib. Aleylehe run ma sheegay ninkii yidhi “Abeeso far loo taagay fanaxey u boodaa!!!!” Wanaag fala bay Gadabuursi lahaayeene wanaagoodii uus ma ku jabay?
Ceebey Tacaal !!!
Saaka ayaan hadana wararka ka ogaadey iney Saylac kusii socdaan ina Bixi iyo Abiib Timacad. Waan ka xumahay inaan idhaahdee Gadabuursow arintiinu wey dhamaatay ee ogaada. kol hadii Dijaaj Cawar timacad iyo colkii ugu weynaa ee ina Biixi faraha la galeen Saylac fili maayo iney xitaa waanwaan leedahay arintaa Saylac. Waxase igaga daran eenan ilaa hada garaneynin waxa weeyi waxa Gadabuursi aamusiiyey. Inta ay SNM beesheedu is wey-weydaaraneyso;
Halkuu ka dhacey Madaxweyne ku xigeenkii Gadabuursi kursiga ugu fadhiyay? Halkey ka dhaceen wasiiradii Gadabuursi?
Halkey ka dhaceen Suldaanadii Gadabuursi? Halkey ka dhaceen xildhibaanadii Gadabuursi? Halkey ka dhaceen aqoonyahankii Gadabuursi?
Halkey ka dhaceen cuqaashii iyo odayaashii Gadabuursi?
Ma waxa la gartey iney marwo Zamzam, Duur, Ina Biixi iyo Timocad ka taliyaan arinta Saylac oo looga aamuso? Walee waa cajiib!!! Malaha qaladna ha igu ahaatee waa la iibsadey dhulka oo shacab weynaha Gadabuursi waalaga qarinayaa!!!!
Dhulkan hore loo daranyeeyey ee hadana si walba arintu ha ahaatee looga aamusey waa arin layaable. Waxa Gadabuursi oo dhani uga hadli laayihiin kalmadna ha ahaatee waa amuuro aan hore loo arag. Sida loo ogolaadey inuu Duur markale faraha u lulo odayaasha Gadabuursi Zamzamna usoo hagoogato oo amar ay ku bixiso in tanaasul la sameeyo hore abid uguma dhicin Gadabuursi ee aan idhaahdo Awdaley ayaan daran dhalintaan u dhiibay arintaada…
Ina Biixi iyo Abiib Timcad sida la ogsoonyahay lug bay ku lahaayeen dilalkii ka dhacay dariiqa Dilla iyo Seemaal. Ina Biixi ma qarsan oo waakii yidhi xaq bay nagu leeyihiin beeshii nagu kaalmeysay xasuuqii Gadabuursi. Inuu maanta ka taliyo hadana arinta Saylac waa dhirbaaxo kale oo lagu jiidey Gadabuursi. Waa ceeb dul taala Gadabuursi iney ka aamusaan faragalintaa dhagar qabayaasha ina Biixi iyo Timacad ay ula badheedheen. Gadabuursow sidii hore loo yidhi hadii aad dhimaneyso dhareerkaa la iska duwaaye ta qudha ee idinsoo celineysaa waa inaad qafaashataan kuwa kusii socda Saylac ood u gashaan sidii dadkiina loo galay.
Sidee loo afjari karaa arintan Saylac ee reer qudhii ka fataalayo
Sida qudha ee loo joojin karo arintani waa Gadabuursi oo mid noqda arin walbana mid laga noqdo. Somaliland way burburtay oo waa la ogsoonyahaye iney Gadabuursi ka tashadaan oo dhulkooda la boobayo ilaashadaan waajib bay ku tahay. Maamulka SNM way gaydhanayaan kol hadii riyadii dhamaatey oo rabshad bay ka wadaan dhulka Gadabuursi. Gadabuursi ha dhaafo tuurahan kala duwan ey kala koreen ee meel qudha haka dhawaaqaan. Waa maanta iyo kama danbeyn hadal la is yidhaahdaana ma hadhin ee midnimo halagu badbaadsho dhulkeena. Reerkan SNM ee beelaha ka dhex fataalayana ha la iska qabto.
Gadabuursow dhulkiina SNM idiin ridi meyso idinka uunbaa badbaadin kara. Waa hubaal oo way iibin rabaan ee aamuskan hala dhaafo dhulkiina ku difaaca qori iyo hadalba ogaadana wadajir in wax lagu qabsan karo. Dhulkeena hadii ay daruuri noqoto dhiig haloo daadsho. Waxay gaadhey wakhtigii la difaaci lahaa magaca, sharafta, karaamada, dhulka iyo caruurteena Gadabuursow. Odayaashana waxa looga fadhiyaa iney ka hadlaan arinta Saylac oo faraha ululaan kuwii dadkeena xasuuqay oo ay ku amraan iney dhulkeena ka baxaan. Hadalkiina oo difaac ah ha la maqlo Adeerayaalow.
« Siyaasi Mohammed Jamac Abgaal oo si buuxda u cambaaraynaa farogalinta indho la’aanta ah Maamulka SNM Ka Wadaan Degmada Saylac
Faah faahin: Dagaalkii maanta iyo wararkii udanbayeey (Warbixin) »